राहुल गान्धीले हिन्दूहरूसँग माफी माग्नुपर्ने अमित शाहको भनाइ
काठमाडौं – विगत केही दिनयता गरिएका अडकललाई साँचो साबित गर्दै भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले उत्तर प्रदेशको अमेठीका साथसाथै केरलको वायनाड सीटबाट पनि चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् ।
उता भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित शाहले उनीमाथि व्यंग्य गर्दै राहुल जहाँ गए पनि देशका जनताले उनीसँग हिसाब माग्ने बताए ।
बिजनौरमा भाजपाको आमसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भने, ‘राहुल गान्धी अमेठी छोडेर केरलतिर भागेका छन् । सबैलाई थाहा छ, यसपालि अमेठीमा उनको हरहिसाब हुन लागेको छ । तपाईं जहाँ गए पनि देशका जनताले तपाईंसँग हिसाब माग्नेछन् ।’
यसअघि अमित शाहले सम्झौता एक्सप्रेस विस्फोटन घटनामा हिन्दूहरूको बदनामी गरेकोमा राहुल गान्धीलाई माफी माग्न भनेका थिए ।
अमित शाहले भने, ‘पंचकुलाको एक अदालतले सन् २००७ मा भएको सम्झौता एक्सप्रेस विस्फोट मुद्दामा फैसला सुनाइसकेको छ । त्यतिखेर कांग्रेस, सोनिया र मनमोहनको सरकार थियो । उनीहरूले सम्झौता एक्सप्रेसलाई हिन्दू आतंकवादको नमूना भनेका थिए । साधुसन्तलाई अनि निर्दोषलाई मुद्दा लगाइएको थियो । फैसला आउँदा उनीहरूमाथि कुनै पनि प्रमाण फेला परेन ।’
शाहले भने, ‘म राहुल गान्धीलाई सोध्छु, तपाईंले संसारभरि हिन्दू समुदायलाई बदनाम गर्नुभयो । हिन्दू पनि आतंकवादी हुन सक्छ र ? हामीहरू त कमिलालाई पीठो खुवाउने मानिस हौं । कसैलाई के मार्थ्यौं हामी ? राहुल गान्धीले भोट बैंकको राजनीतिका लागि हिन्दूहरूको बदनामी गरेका छन् । तपाईंले लश्करलाई सफाइ दिनुभयो । देशको सुरक्षामा खेलाँची गर्नुभएको छ तपाईंले । चिदम्बरम, शिन्दे र राहुलले अमेरिकी राजदूतलाई लश्कर समस्या नभएको बताएका थिए । समस्या हिन्दू आतंकवाद मच्चाउने मानिस भएको उनले बताएका थिए । तर अदालतले हिन्दूलाई सफाइ दियो । राहुलले अब माफी माग्नुपर्छ ।’
पत्रकार खशोग्गीको हत्याको तालिम साउदीहरूले अमेरिका...
भारतको लोकसभा निर्वाचन : कांग्रेसले सार्वजनिक गर्‍य...